I-L0vetodream ilumkisa ukuba singayibona iMac ngeApple Silicon nge-Epreli 20 | Ndisuka mac
I-L0vetodream ilumkisa ukuba singayibona iMac ngeApple Silicon nge-Epreli 20
El Ngomhla we-20 ku-Epreli Sinokuqeshwa ngokukuko noApple apho inkampani izakuqala khona umsitho "wolayisho wasentwasahlobo" kwaye apho amarhe abonisa ukuba inkampani inokuveza izixhobo ezitsha. I-U.S senze isindululo kunokuba sasibona. Kubonakala ngathi asizukukwazi ukubona ipensile entsha ye-Apple. Umhlalutyi weendaba owaziwayo u-Apple kunye ne-leaker L0vetodream ucebisa oko iMac entsha iyeza.
Kwi-Twitter ngale ntsasa, uL0vetodream uthumele umfanekiso wobugcisa beendwendwe zika-Apple kumnyhadala ka-Epreli 20 ecaleni komfanekiso wendlela ye-G3 iMac kuyo yonke imibala eyahlukeneyo. Ngokukodwa, oku kuza emva kokuba uL0vetodream ngaphambili ebhale umfanekiso wesimemo somsitho kunye negama elithi "uyonwabele le mibala." Kubonakala ngathi amarhe e iMac entsha kunye nemibala eyahlukeneyo inokuba yinyani.
Asikokokuqala sisiva la marhe. Kodwa ngokuqinisekileyo iyanda njengoko umhla womsitho usondela, njengoko sele usazi ukuba umhla olandelayo ngu-Epreli 20. Ngaba siyayibona iMac entsha kunye nemibala? Ayisiyonto sinokukhetha ukuyikhupha kancinci xa sijonga zonke izibhengezo ezenziwa egameni lakho. Ewe kunjalo, kukho amathuba amaninzi okubona iMac entsha kunye neApple Silicon kuneeAirtag.
Siza kushiya amathandabuzo kwinyanga ezayo ka-Epreli 20 kwaye siza kubona ukuba ngaba iApple iyayazisa iMac entsha ene-intshi ezingama-24 kunye nenye ine-intshi ezingama-30 okanye ezingama-32. Zombini zineprosesa entsha ejika ibe lililo lokwenyani kunye nomsebenzi wobugcisa. Abanye bade bathi kuyilo iphefumlelwe yiPro Display XDR. Ngoku, ngethemba lokuba amaxabiso ayisosithintelo kubo bonke abo bafuna ukubambelela kwimodeli entsha yenkampani yaseMelika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-L0vetodream ilumkisa ukuba singayibona iMac ngeApple Silicon nge-Epreli 20
I-Docker isungula iqonga lokusebenzisana kwesicelo sayo seMac M1